As of Tue, 31 Mar, 2020 00:20
नमुना विद्यालयको सपना
विद्यालय शिक्षाको समग्र परिवर्तनका लागि सञ्चालनमा आएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले कार्यक्रम अवधिभर १ हजार विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि पनि सरकारले बजेटमार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक नमुना विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको भए पनि सामुदायिक विद्यालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कागजमै सीमित बन्यो ।
नेपालको भूमिको स्वामित्वमा द्वैध स्वामित्व कायमै छ । मोही र जमिनदारको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धका कारणले उत्पादकत्वमा निकै कमी ल्याएको छ । कुल जमिनको उत्पादनको केवल ३ प्रतिशत मात्रै भूमिलाई उत्पादक बनाउने काममा खर्च गरिएको पाइन्छ । नेपालको जमिन वितरणमा असमान भएकाले द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ ।
अमेरिका शक्तिशाली चीनसँग सहअस्तित्वमा रहन सक्ने
स्थापित विश्वशक्ति अमेरिका विश्वको उदीयमान विश्वशक्ति चीनसँग सहअस्तित्वमा रहन सक्ने पूर्व अमेरिकी अर्थमन्त्री ज्याक लिउले बताए ।
राजनीतिक सिन्डिकेटको मारमा विश्वविद्यालय
नेपालमा उच्च शैक्षिक संस्थाका रूपमा वि.सं. २०१६ असार ३० गते स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले झन्डै ६ दशकको समयअवधि पूरा गर्दैछ । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना भई देशको चौतर्फी विकास र उच्च शिक्षाको प्रगतिमा खेलेको भूमिकाकै कारण हाम्रो देश अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
नीतिगत स्पष्टता : अलमलमा लगानीकर्ता
पुँजीबजारलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने सरकारको वार्षिक नीति, बजेट, आर्थिक विधेयकपछि पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र देशका लागि मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने ‘मौद्रिक नीति’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
ठूला मालिक को–को हुनुहुँदो रहेछ ?
केही महिनाअघिदेखि उदुमै मच्चाएको, केही व्यक्तिको हत्या भएको भनिएको, केही व्यक्ति समातिएको भनेर समाचारमा आएको ३३ किलो सुन काण्डका बारेमा हिजोआज कुनै चर्चा भएको पाइँदैन । किन हो किन, यसका बारेमा थोरबहुत जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा रहेको छ ।
वर्षातसँगै कष्टप्रद बन्दै ग्रामीण सडक
सडक सञ्जालहरूको विस्तार र यातायातको सहजता विकासको पहिलो आधार हो । नेपालमा अझै पनि सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो केही वर्षयतादेखि देशका विभिन्न ठाउँमा ग्रामीण सडक बनाउने होड चलेको छ ।
उच्च तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र कति सान्दर्भिक ?
हाल प्रस्तावित निजामती ऐनको निकै चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । हुन पनि किन नहोस्, नेपालमा हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् नयाँ दल सरकारमा जाने र निजामती सेवा ऐनको कर्मचारी भर्ना, बढुवा र सरुवा प्रणालीमा अध्ययन–अनुसन्धान र सुझावविपरीत भइरहेका कानुनी परिपाटीमा परिवर्तन गरी कर्मचारीलाई अन्योलमा राख्ने विगतका सरकारले गरेझैँ यो सरकारले सो कार्यलाई निरन्तरता दिने गरी निजामती ऐनमा प्रस्ताव गरेको छ ।
गुणस्तरीय संघीय शिक्षामा बजेट र आत्मनिर्भरता
वर्तमान अवस्थामा सरकारले बल्ल ‘शिक्षक लाइसेन्स’ लिएर बूढा बनिसकेका शिक्षित वर्गका लागि शिक्षक पदको खुला विज्ञापन खुलायो । २०५२ सालपछि देशमा दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म जम्मा ३ वटा मात्र शिक्षकका लागि खुला परीक्षा हुनुले नै नेपालले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट पार्छ ।
संघीयताको सन्दर्भमा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन
नेपालमा छात्रवृत्तिको इतिहास आदिकालदेखि रहेको पाइन्छ । गुरु तथा शिष्यहरूलाई घरपरिवार तथा समाजबाट खाद्यान्नको जोहो गरी निःशुल्क शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर कि सम्पत्ति कर ?
सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरिरहँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । यसअघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रावधानलाई संशोधन गरी सम्पत्ति करको नयाँ व्यवस्था थालिएपछि स्थानीय सरकारमा अन्योल बढेको हो ।
लघुवित्त सेवामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग किन नगर्ने ?
आजको युग सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) को युग हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनको एक अभिन्न अंग भइसकेको छ । हामीले चाहेर वा नचाहेरै पनि सामाजिक सञ्जालले हाम्रो जीवनशैली र सोच्ने तरिकालाई प्रभावित पारिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता
सामान्य अर्थमा मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो र मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रयी बैंकले निर्माण गर्छ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
डलर, भारु र नेरु : इतिहासदेखि वर्तमानसम्म
कुनै समय नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरभन्दा बलियो थियो । अहिले इतिहासकै कमजोर बनेको छ । सामान्यतया अर्थतन्त्र बलियो हुँदा मुद्राको मूल्य बलियो र अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा मुद्राको मूल्य पनि कमजोर हुन्छ ।
व्यापारघाटा र परनिर्भरता : उपाय नास्ति !
हालैमात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपाली अर्थतन्त्रको कुल आकार करिब ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको र सोही आधारमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय पनि १ हजार अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूले खुलेर उत्सव मनाउन मात्र बाँकी राखेनन्, नभए सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्री तथा आर्थिक अधिकारीहरूले ‘देश अब विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुगिसकेको’ भन्नेसमेतका अभिव्यक्ति दिन भ्याए ।